खतना - विकिपिडिया
यो लेखलाई मानव अनुवाद गर्न आवश्यक छ।
यो लेख वा यसको कुनै खण्ड मानव अनुवाद नभएर अप्रशोधित यान्त्रिक अनुवाद गरि बनाइएको हुन सक्छ। यस लेख वा खण्डलाई लेख निर्माण गरिएको मितिले ७ दिनभित्र मानव अनुवाद गरि सुधार गर्नुहोस् अन्यथा यो लेख प्रबन्धकद्वारा मेटिनेछ। लेख सुधार भएमा समीक्षक वा प्रबन्धकद्वारा यो सूचना हटाइनेछ।
खतना जानकारी हिन्दी मा
पुरुषहरूमा खतना भनेको उनीहरूको लिंगको अग्र छाला पूर्ण वा आंशिक रूपमा हटाउने प्रक्रिया हो। "खतना" को लागि ल्याटिन शब्द सर्कम (अर्थ "वरिपरि") र cædere (अर्थ "काट्नु" हो)। खतनाको प्रारम्भिक चित्रण गुफा चित्रहरू र पुरातन इजिप्टियन चिहानहरूमा पाइन्छ, यद्यपि केही छविहरूको व्याख्या स्पष्ट छ। यहूदी धर्म, पुरुषहरूको धार्मिक खतनालाई ईश्वरको आदेश मानिन्छ। इस्लाममा, कुरानमा यसको चर्चा नभए पनि यसलाई व्यापक रूपमा अभ्यास गरिन्छ र प्रायः सुन्नह भनिन्छ। अफ्रिकाका केही इसाई चर्चहरूमा पनि यो अभ्यास गरिन्छ। , केही ओरिएन्टल अर्थोडक्स चर्चहरू सहित। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुसार, विश्वव्यापी अनुमानहरूले ३०% पुरुषहरू खतना गरिएको संकेत गर्दछ, जसमध्ये ६८% मुस्लिमहरू छन्। खतनाको अभ्यास प्रायः धार्मिक सम्बद्धता र कहिलेकाहीँ संस्कृति अनुसार फरक हुन्छ। खतना सांस्कृतिक वा धार्मिक कारणहरूका लागि प्रायः किशोरावस्थामा गरिन्छ; केही देशहरूमा यो बाल्यकालमा बढी सामान्य हुन्छ।
खतनाको बारेमा विवाद छ। खतनाको समर्थनमा तर्कहरू समावेश छन् कि यसले महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभहरू प्रदान गर्दछ, जसले जोखिमहरू भन्दा बढी हुन्छ, यसले यौन कार्यमा कुनै ठूलो प्रभाव पार्दैन, कि अनुभवी चिकित्सकले गर्दा यसको जटिलता दर हुन्छ। यो दुर्लभ छ र सबै भन्दा राम्रो गरिन्छ। नवजात अवधिमा। खतनाको विरुद्धमा तर्कहरू समावेश छन् कि यसले पुरुषको जननांग कार्यहरू र यौन आनन्दलाई प्रतिकूल असर गर्छ, चिकित्सा मिथकहरूद्वारा जायज छ, अत्यधिक पीडादायी छ र मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो।
द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसन द्वारा सन् १९९९ को रिपोर्ट अनुसार, "... अनुष्ठान वा धार्मिक उद्देश्यका लागि खतना गर्न सीमित छैन", "वास्तवमा, त्यहाँ विशेष समिति र चिकित्सा संस्थाहरूको आवश्यकता छ।" सबै वर्तमान नीति कागजातहरू दिनचर्या सिफारिस गर्दैनन्। नवजात शिशु खतना र आमाबाबुलाई सही र गैर-भेदभावपूर्ण जानकारी प्रदान गर्न मद्दत गर्नुहोस् ताकि उनीहरूले आफ्नो छनोटलाई सूचित गर्न सकून्।"
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO; 2007) (WHO; 2007), HIV/AIDS सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम, (UNAIDS; 2007) (UNAIDS; 2007) र रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरू (CDC; 2008) ले भन्छ। प्रमाणले सम्भाव्यतालाई औंल्याएको छ कि पुरुषको खतना लिंग-योनि सेक्सको क्रममा पुरुषहरूद्वारा सर्छ। उल्लेखनीय रूपमा एचआईभी सर्ने जोखिमलाई कम गर्छ, तर खतनाले आंशिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ र फैलाउन रोक्न प्रयोग गरिने अन्य अवरोधहरूको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन भनी बताउँछ। एचआईभीको गर्नु पर्छ।
२ संस्कृति र धर्म
४ इन्ही हेन
६ बाहिरी लिंक
खतनालाई धार्मिक प्रथा, प्रजनन सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव, जनजाति प्रतीक, स्वीकृतिको अनुष्ठान, पुरुषत्वलाई जोड दिने प्रयास, शत्रु र दासहरूलाई यातना दिने माध्यम वा स्वास्थ्य उपचारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो भनी विभिन्न रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। डार्बीले यी सिद्धान्तहरूलाई "द्वन्द्वात्मक" भनी वर्णन गर्छन् र भन्छन् कि "विभिन्न सिद्धान्तहरूका समर्थकहरू बीचमा एउटा मात्रै बिन्दुमा सहमति भएको छ कि यसले राम्रो स्वास्थ्यलाई बढावा दिनको लागि केही गर्न सक्दैन।" इम्मरम्यान एट अल। खतनाले युवा पुरुषहरूमा यौन इच्छा घटाउँछ, र तिनीहरूले अनुमान गर्छन् कि यो खतना गरिएको जनजातिहरूको लागि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ थियो, जसमा यो विस्तार भयो। (विल्सन) विश्वास गर्छन् कि खतनाले समूहप्रति व्यक्तिको प्रतिबद्धताको संकेत गर्दछ र घटाएर विकासवादी उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ। विवाहबाह्य यौन सम्बन्धको घटना।
खतनाको सबैभन्दा पुरानो दस्तावेजी प्रमाण पुरातन इजिप्टबाट आउँछ। सेमिटिक मानिसहरूमा खतना सामान्य थियो, यद्यपि यो विश्वव्यापी थिएन। यद्यपि, अलेक्ज्याण्डर द ग्रेटको विजय पछि, खतनाको लागि ग्रीकहरूको घृणा (उनीहरूले पुरुषलाई पूर्ण रूपमा "नग्न" मान्थे जब उसको पूर्वाग्रह हटाइयो) यसले यसलाई पछ्याउनेहरू मध्ये धेरैमा ल्यायो। घटनाहरु।
उप-भूमध्यवर्ती अफ्रिकाका धेरै जातीय समूहहरूमा खतनाको जरा छ र अझै पनि योद्धा स्थिति वा वयस्कतामा प्रवेशको संकेतको रूपमा किशोरहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
संस्कृति र धर्म[सम्पादन गर्ने]
केही संस्कृतिहरूमा, पुरुषहरूलाई जन्मेको लगत्तै, बाल्यकालमा, वा किशोरावस्थाको वरिपरि पारिश्रमिकको अनुष्ठानको रूपमा खतना गर्न आवश्यक छ। खतना सामान्यतया यहूदी र इस्लामी अनुयायीहरू बीच अभ्यास गरिन्छ।
यहूदी कानून अनुसार, खतना एक mitzva aseh ("सकारात्मक आदेश") हो र यहूदी रूपमा जन्मेका र खतना नगरिएका यहूदी धर्ममा परिवर्तन भएका पुरुषहरूका लागि अनिवार्य छ। यदि बच्चाको जीवन वा स्वास्थ्यमा खतरा छ भने मात्र यो बच्न वा टार्न सकिने छ। यो कार्य सामान्यतया जन्मको आठौं दिनमा ब्रिट मिलाह (वा बोलचाल भाषामा ब्रिस मिलह) नामक कार्यक्रममा मोहेलद्वारा गरिन्छ, जसको हिब्रूमा अर्थ "खतनाको चलन" हो। केही अर्थोडक्स सम्प्रदायहरूमा यो यति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ कि यदि खतना नगरिएको यहूदी मानिसको मृत्यु भयो भने, कहिलेकाहीं गाड्नु अघि खतना गरिन्छ। यद्यपि यसलाई उन्नाइसौं शताब्दीका सुधारवादी नेताहरूले "बर्बर" भनेर वर्णन गरेका छन्, खतनाको अभ्यास "केन्द्रीय अनुष्ठान" बनेको छ, र सन् १९८४ देखि सुधार यहूदी धर्मको संघले यसको "बेलिटिल" अपनाएको छ। ३०० भन्दा बढी मोहेल पेशेवरहरू छन्। "बेरिट मिला कार्यक्रम" अन्तर्गत प्रशिक्षित र प्रमाणित। मानवतावादी यहूदी धर्मले तर्क गर्दछ कि "यहूदी पहिचानको लागि खतना आवश्यक छैन"।
इस्लाममा, खतना केही हदीसमा उल्लेख गरिएको छ (यसलाई खितानको रूपमा उल्लेख गरिएको छ), तर कुरानमा होइन। केही फिकह विद्वानहरूले खतना सिफारिस गरिएको छ (सुन्नाह); अरूले भने अनिवार्य छ। केही मानिसहरूले खतनाको आवश्यकता अब्राहामलाई दिइएको पदमा आधारित छ भनी तर्क गर्न हदीस उद्धृत गर्छन्।
क्याथोलिक चर्चले खतनाको अभ्यासलाई घातक पापको रूपमा निन्दा गर्‍यो र १४४२ मा बासेल-फ्लोरेन्सको इक्यूमेनिकल काउन्सिलमा यसको विरोधको आदेश दियो।
कप्टिक, इथियोपियन र इरिट्रियन अर्थोडक्स चर्चहरू र केही अफ्रिकी चर्चहरूमा पनि खतनाको अभ्यास गरिन्छ। केही दक्षिण अफ्रिकी चर्चहरूले गैर-क्रिस्चियन अनुष्ठानको रूपमा खतनाको विरोध गर्छन्, जबकि अन्य, केन्याको नोमिया चर्च सहित, सदस्यताको लागि खतना आवश्यक छ। अरू केही चर्चहरूले येशूको खतना मनाउँछन्। ईसाईहरूको ठूलो बहुमतले खतनालाई धार्मिक आवश्यकताको रूपमा पालन गर्दैन।
दक्षिण कोरियामा खतनाको प्रमुख कारण कोरियाली युद्ध पछि अमेरिकाको सांस्कृतिक र सैन्य प्रभाव हो। पश्चिम अफ्रिका वा अन्य कुनै कारणले नवजात शिशुको खतनाको जनजाति प्रभाव विगतमा हुन सक्छ; यो हाल केही गैर-मुस्लिम नाइजेरियाली समाजहरूमा अभ्यास गरिएको छ र केवल एक सांस्कृतिक मानक हो। केही अफ्रिकी, प्रशान्त टापु र अर्न्हेम ल्यान्ड क्षेत्रमा अस्ट्रेलियाली आदिवासी परम्पराहरू, जहाँ यो इन्डोनेसियाली द्वीपसमूहमा अवस्थित सुलावेसीका मकासन व्यापारीहरूले अभ्यास गर्छन्। परिचय, खतना दीक्षा संस्कार को एक भाग हो। केही अस्ट्रेलियाली आदिवासी समाजहरूमा अभ्यास गरिएको खतनाको अनुष्ठान तिनीहरूको पीडादायी प्रकृतिको लागि परिचित छ: सबिन्सिसन पश्चिमी मरुभूमिमा बस्ने केही आदिवासी मानिसहरूमा अभ्यास गर्ने अभ्यास हो।
प्यासिफिकमा, खतना वा चीरा फिजीका मेलानेसियन र भानुआटु जनताहरू बीच सर्वव्यापी छ, जबकि पेन्टेकोस्ट टापुमा परम्परागत ल्यान्ड-डाइभिङमा भाग लिन खतना भएकाहरूका लागि मात्र आरक्षित छ। खतना वा चीरा पनि सामान्यतया पोलिनेसियन टापुहरू सामोआ, टोङ्गो, निउ र टिकोपियामा अभ्यास गरिन्छ, जहाँ यो अभ्यासलाई पूर्व-क्रिस्चियन/औपनिवेशिक अभ्यास मानिन्छ। सामोआमा पनि यो पर्व मनाइन्छ।
केही पश्चिम अफ्रिकी समूहहरूमा, जस्तै डोगोन र डोवायो, खतनालाई पुरुषको "उत्पादक" पक्षलाई हटाउने प्रतीक मानिन्छ, जसले केटाहरूलाई पूर्णतया मर्दाना पुरुषहरूमा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ। दक्षिणी नाइजेरियाका Urhobo मानिसहरू बीच, यो पुरुषत्वमा केटाको प्रवेशको प्रतीक हो। औपचारिक अभिव्यक्ति, Omo te Oshare ("यो केटा अब पुरुष हो"), एक उमेर समूहबाट अर्को उमेर समूहमा सर्ने अनुष्ठान समावेश गर्दछ। कालेन्जिन र मसाई जस्ता नाइलियन मानिसहरूका लागि, खतना ट्रान्जिटको एक रूप हो। एक संस्कार, जुन धेरै केटाहरू द्वारा केही वर्षमा एक पटक सामूहिक रूपमा अवलोकन गरिन्छ, र सँगै खतना गरिएका केटाहरूलाई एउटै उमेर समूहको सदस्य मानिन्छ।
विश्वव्यापी रूपमा, खतना गरिएका पुरुषहरूको अनुपातको अनुमान छैटौंदेखि एक तिहाइसम्म फरक हुन्छ। डब्ल्यूएचओले अनुमान गरेको छ कि १५ वर्ष र माथिका ६६४,५००,००० पुरुषहरू (विश्वव्यापी प्रचलनको 30%) खतना गरिएको छ, जसमध्ये लगभग ७०% मुस्लिमहरू छन्। मुस्लिम संसार, दक्षिणपूर्वी एसिया, अफ्रिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलिपिन्स, इजरायल र दक्षिण कोरियामा खतना धेरै प्रचलित छ। यो युरोप, ल्याटिन अमेरिका, दक्षिणी अफ्रिकाका केही भागहरू र एशियाका अधिकांश भागहरू र समुद्री टापुहरूमा अपेक्षाकृत दुर्लभ छ। यसको अभ्यास मध्य पूर्व र मध्य एसियामा लगभग सर्वव्यापी छ। डब्ल्यूएचओका अनुसार, "सामान्यतया एसियामा खतनाको धेरै थोरै घटनाहरू छन्, अपवादहरू कोरिया गणतन्त्र र फिलिपिन्स हुन्।" अनुमानित नक्सा व्यापकता, जसमा यसको स्तर सामान्यतया कम (<20%) युरोपभरि छ, र Klavs et al. (Klavs et al.) को रिपोर्टको निष्कर्ष निकाल्छ जसले "युरोपमा खतनाको प्रचलन कम छ भन्ने धारणालाई समर्थन गर्दछ" समावेश छन्।
डब्ल्यूएचओले संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडामा खतनाको प्रचलन क्रमशः ७५% र ३०% रहेको अनुमान गरेको छ। अफ्रिकामा यसको प्रसार भिन्न हुन्छ, यो केही दक्षिणी अफ्रिकी देशहरूमा 20% भन्दा कम छ, जबकि यो पूर्व र पश्चिम अफ्रिकामा सर्वव्यापी छ।
इन्ही हेन[सम्पादन गर्ने]
बाहिरी लिंक[सम्पादन गर्ने]
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=खतना&oldid=1061044" बाट अनुप्रेषित
मानव अनुवाद गर्नुपर्ने लेखहरू
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १३:५४, १६ मार्च २०२२ मा परिवर्तन गरिएको थियो।